AutoSEO vs. FullSEO - Kedu Semalt SEO Ọrụ Kachasị Mma maka Gị
Ya mere, ị emechaala mkpebi amamihe dị na ya iji nyochaa ma jiri ọrụ SEO na-eduzi ụlọ ọrụ Semalt?
Site na mkpebi gị, n’oge na-adịghị anya ị ga-esonye n’ọdọ mmiri nke obi ụtọ na afọ ojuju ndị ahịa eritela uru site na ọrụ ahịa dijitalụ anyị. Mana mkpebi ahụ na-abịa ọrụ dị ukwuu nke ịhọrọ ọrụ dị mma. Otu nke dị mma maka gị ma kwekwaa mkpa gị ụfọdụ na ebumnuche azụmahịa.
Ọ bụrụ na ị na-achọ imeziwanye arụmọrụ SEO nke weebụsaịtị gị, Semalt na-enye nchịkọta flagship abụọ: AutoSEO na FullSEO.
Ọ bụ ezie na ịnwere ike inwe nghọta zuru oke banyere ihe niile agụnyere na nchịkọta abụọ a, a ka nwere ike inwe obi abụọ na ajụjụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido na ngalaba nke SEO, nkọwa zuru oke dị mkpa karịa.
Ya mere, taa anyị na-ewe oge iji nyochaa nchịkọta SEO anyị kacha mma abụọ. Mgbe ị gabigasịrị akụkọ ntụle ngwa ngwa a, ị ga-enwe ike ịhọrọ ngwugwu dị mma maka azụmahịa gị.
AutoSEO na FullSEO - Ọrụ SEO nke Semalt
Ka anyị buru ụzọ bido n’ime ọdịnaya nke nchịkọta. Ọ bụ ezie na ha abụọ na-ezubere iche maka azụmaahịa, enwere ọdịiche na oke nke ngwugwu ọ bụla. Akụkụ a ga-enye gị nkọwa ndị ọzọ gbasara ọdịiche ndị a.
Gịnị bụ AutoSEO?
AutoSEO site na Semalt bụ ngwugwu 'ụlọ zuru ezu' nke na-ekpuchi ọrụ kachasị mma na njikarịcha njikarịcha ọchụchọ (SEO) maka azụmahịa gị n'ịntanetị. Ọ na-eme mkpọsa SEO maka weebụsaịtị gị ma na-eme ọtụtụ ihe dị na peeji ma na ihu iwe iji bulie ogo organic gị.
Have nwere webụsaịtị na-anaghị egosi na nchọta ihe gbasara Google? AutoSEO nwere ike igosi gị ụzọ ka ọ na - arụ ụfọdụ ọrụ njikarịcha kachasị mkpa. E depụtara ụfọdụ n'ime ha n'okpuru:
Nchọpụta isiokwu - Nyochaa azụmahịa gị, ụlọ ọrụ gị, na ebe nrụọrụ weebụ gị iji mepụta ndepụta nke isiokwu dị oke mkpa ntụgharị ntụgharị ajụjụ ndị ndị ahịa gị nwere ike ịchọ na igwe nchọta dị ka Google ma ọ bụ Bing. Nke a bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa SEO
On-Page njikarịcha - Infusion nke nri Keywords n'ime ọdịnaya nke ọ bụla na ibe ọ bụla nke gị na ebe nrụọrụ weebụ yana njikarịcha ndị ọzọ na peeji nke ihe dị ka utu aha, meta nkọwa, na àgwà alt àgwà.
Njikọ Njikọ - A makwaara dị ka njikarịcha peeji, ọ gụnyere imepụta na ịkọwa ọdịnaya dị mkpa na weebụsaịtị ndị ọzọ yana ịnweta njikọ azụ na ngalaba gị. Nke a na - eme ka uru SEO dị (ikike ngalaba, ọkachasị) nke weebụsaịtị gị site na iduzi ihe ọ juiceụ SEOụ SEO site na saịtị ndị a na ngalaba gị
Nchịkọta Weebụ - kwa ụbọchị, kwa izu, na kwa ọnwa, na nyocha nke nkeji nke nyocha saịtị iji ghọta ihe metrik dị iche iche dịka okporo ụzọ, ntụgharị, na njikọta ndị ọbịa niile.
AutoSEO na-arụzi ọtụtụ n'ime ọrụ ndị a ma na-ewetara gị mgbasa ozi SEO na-arụ ọrụ nke chọrọ iji bulie ọnọdụ gị niile na weebụ.
Ọgụgụ 1 - Inyocha data nyocha bụ akụkụ dị mkpa nke SEO (AutoSEO na-enye ya)
Otu njirimara nke di iche AutoSEO na FullSEO bu na onye mbu enyeputara ihe osiso. Ọ bụrụ n’inwe azụmaahịa dị mma ma nwee ntụkwasị obi na asọmpi dị ala na ntanetị, AutoSEO nwere ike nweta nsonaazụ gị n'ihe ụfọdụ izu ole na ole. N'echiche zuru oke, SEO na-ewekarị ọnwa maka mmetụta dị mma. Agbanyeghị, ịkwesịrị iburu n'uche na Semalt ga-eme nyocha nke mbụ iji ghọta otu esi arụpụta ngwa ngwa. Nchịkọta zuru ezu na mkparịta ụka na-esote site na nkwado ndị ahịa anyị nwere ike inyere gị aka ịbịpụta usoro oge siri ike.
N'akụkụ a, AutoSEO zuru oke maka ụdị ndị ọrụ:
Ndị ọchụnta ego na-achọ nkwado SEO maka ọtụtụ azụmahịa ha n'ịntanetị
Ndị na-ede blọgụ na ndị edemede na-achọ ịdọta okporo ụzọ / ọgụgụ
Ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-eme egwuregwu ịntanetị
Were ọmụmaatụ Vaibhar Chaurasia nke HealthKart bụ onye jiri ọrụ AutoSEO rụọ ọrụ iji mee ka ọnọdụ weebụsaịtị ya na Google India kwụsị. N'ime ọnwa abụọ, anyị nwere ike imeziwanye ọkwa nke isi okwu ya dị oke mkpa. Chaurasia nke na-atụ aro Semalt na mmalite azụmaahịa niile, ụlọ ọrụ na MSME gburugburu ụwa, kwuru, "M ga-akwado ndị mbido na ụlọ ọrụ ndị ahụ, ndị na-ata ahụhụ na ọkwa dị ala na enweghị ọhụhụ nke weebụsaịtị ha.
AutoSEO ga - abụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ maka ụwa nke SEO (ma ọ bụ ahịa dijitalụ, n'ozuzu) ma ọ bụ na-achọ nsonaazụ ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị bụ azụmahịa mmalite nke chọrọ iji ngwa ngwa ma zuru oke nke ọnọdụ ntiwapụ nke coronavirus , anyị ga-akwado AutoSEO.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị dị ogologo oge ma ịchọrọ iwulite aha ọma banyere azụmahịa gị n'ịntanetị site na SEO, ị kwesịrị ilele FullSEO, ngwugwu A-to-Z SEO.
Kedu ihe bụ FullSEO?
Thesebọchị ndị a, onye ọ bụla na-akpọ onwe ha ọkachamara SEO. Nke ahụ nwere ike ịbụ eziokwu ma ọ bụrụ na ị na - atụle mkpokọta mkpokọta weebụ ma dee ọdịnaya dịka ụzọ iji nweta nsonaazụ organic. N'ikwu eziokwu, ị ga-amara nke a, SEO dị omimi ma sie ike karịa nke ahụ.
Iji nwee ihe ịga nke ọma SEO mkpọsa maka azụmahịa gị nke na-eme ka ị nwee ezigbo ntụgharị (ya bụ, ndị ahịa n'ezie), ịkwesịrị ịgafe ihe ndabere. Ọ bụkwa ebe ahụ ka FullSEO nke Semalt batara na foto a.
SEdị AutoSEO dị elu, ngwugwu a na-enye gị ihe niile ịchọrọ na mkpọsa SEO. Site na nyocha isiokwu gaa na nyocha, FullSEO nwere ihe niile azụmahịa chọrọ ịkwalite ọnụnọ ya n'ịntanetị ma mee ka ahịa ya sie ike. Anyị na-ekwu maka ịmụba okporo ụzọ, ụzọ, na mkpokọta na aha maka weebụsaịtị gị n'etiti netizens.
Ọgụgụ 2 - Nkwado ndị ahịa bụ otu n'ime isi ihe zuru oke nke FullSEO ma e jiri ya tụnyere AutoSEO
Na FullSEO, ị na-elele ahịa na-abawanye, uru, yana mmekọrịta ya na ndị na-ere ahịa nke atọ. Uru ga-abara gị na azụmahịa gị n'ọnwa na afọ ị na-agba n'ọtụtụ mgbapụta nke FullSEO ga-enye gị ụgwọ ọrụ ogologo oge. Dị ka ị maara, iwulite weebụsaịtị siri ike nwere ikike ngalaba dị elu taa nwere ike ị nweta uru maka afọ na afọ ndị na-abịanụ.
Nke a bụ ndepụta nke ọrụ dị oke egwu ị ga - enweta na mgbakwunye ihe niile AutoSEO na - enye:
Idozi Ntanetị Webụsaịtị - njikarịcha CMS, nhazi atụmatụ, imeziwanye peeji ngwa, webmaps, na akara GA / GTM. A ga-ewepụta ihe zuru ezu na ebe nrụọrụ weebụ gị yana usoro edozi isi nke jupụtara na ụlọ ọrụ SEO na ahịa
Ọdịnaya - Achọrọ ọdịnaya ọdịnaya ọ bụla - site na weebụsaịtị nke weebụsaịtị na ntanetị mgbasa ozi na mgbasa ozi PR - ga-ekwenye, mejupụta ma bipụta maka mmelite nke uru SEO nke weebụsaịtị gị.
Gba ajụjụ - Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na SEO, mgbe ahụ ị ga-achọ ndụmọdụ gbasara omume kacha mma. Ihe ngwugwu FullSEO nke Semalt ga-enye gị aro gbasara ụzọ nrube isi nke ọdịnaya, aghụghọ dị iche iche na usoro dị ka snippets bara ụba, yana ọtụtụ ihe omume dị iche iche na-ejide n'aka na ị ga-eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị banye na peeji nke otu ihe ọchụchọ kachasị amasị gị.
N'ụzọ bụ isi, na FullSEO, ị ga-enweta atụmatụ ahaziri maka azụmahịa gị n'ịntanetị nke na-ele nnukwu foto ahụ anya. You bu onye ohuru e-commerce ohuru n’ulo ahia nke obodo juputara na oke ma obu webusaiti guzobere? FullSEO ga - akpo gị n'elu karịa n'usoro ịntanetị.
Were ihe atụ nke ụlọ ọrụ e-commerce Zanvic, bụ nke jiri ọrụ Semalt zuru oke nke Semalt ma nwee ike ịbawanye okporo ụzọ ya site na 500% n'ihe na-erughị ọnwa asaa. Na ngwụcha ọnwa isii mbụ nke mkpọsa ahụ, Semalt wepụtara ihe ruru 150 nke isi okwu akara ya na nsonaazụ 10 kachasị elu nke Google.
O doro anya na FullSEO n’ezie nwere ihu elu n’elu AutoSEO nakwa na ọ na-agbaso ụzọ kacha mma. Mana olee otu ị ga - esi mara ma FullSEO dịịrị gị ma ọ bụ na ọ bụghị?
Na ntụle, a na-akwado FullSEO maka ndị na-ahụ maka ọrụ, ndị mbido mba ụwa na-akwụ ụgwọ nke ọma, yana ụlọ ọrụ na-enwe olileanya itisa ụlọ ọrụ ha.
Kedu Onye I Kwesịrị Choosehọrọ?
Dika inwere ike iwepu ihe edere n’elu, o doro anya na AutoSEO bu ngwugwu SEO Starter nke nwere obere ihe n’ime ya. Ya mere, o zuru oke maka ndị mmadụ n'otu n'otu na obere mbido ndị chọrọ nsonaazụ ngwa ngwa.
N'aka nke ozo, Semalt na-atụ aro FullSEO ka ụlọ ọrụ corporates na e-commerce ndị chọrọ iche na nnukwu ma na-egbu nnukwu ka ha nwee ike ịga nke ọma n'ihu nnukwu asọmpi.
Tụnyere AutoSEO na FullSEO: Nchịkọta Ọsọ
Anyị maara na ụfọdụ n’ime unu nwere ike iwe ọsọ ọsọ idozi ọrụ n’oge ọrụ mkpọchi a. Ya mere, ebe a bụ nchịkọta ngwa ngwa n'ụdị tebụl. Lelee otu nchịkọta SEO zuru ezu si dị iche n'ofe oke.
Ka ọ dị ugbu a, ị kwesịrị inwe echiche ziri ezi gbasara nhọrọ gị. Ọ bụ ezie na ma AutoSEO na FullSEO nwere uru ha dị iche iche, ị kwesịrị ị na-ahọrọ nke kachasị ga-adabara gị mkpa.
Maka nyocha nke weebụsaịtị gị, kpọtụrụ anyị taa . Nwekwara ike ịmalite inye gị nnwale ọnwụnwa AutoSEO site na ịpị ebe a.